ပျိုရွယ်သူတို့က မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အသက်ရှင်၍ ကြီးရင့်သူတို့က သတိရတမ်းတခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်တတ်၏။
Email Posting အား စမ်းသပ်ခြင်း
Email Posting အား စမ်းသပ်ပြီး တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်....
ရေးသားသူ - T.S ၊ အချိန်- 3:40 PM0Comments
သားစိုး ဘလော့ ပြန်ရေးချင်ပါပြီ
သားစိုး ဘလော့ပြန်ရေးချင်ပေမယ့် ဘလော့ဂါ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဝင်လို့မရတာနဲ့ အခက်တွေ့နေရတယ် ...။
အမြဲတမ်း Access has been denied ပဲ ပြောနေတတော့ ဘယ်လို လုပ်ရပါ့...။
ရေးသားသူ - T.S ၊ အချိန်- 2:49 PM0Comments
ရှေ့ဆက်လို့ မလွမ်းချင်ဘူး . . . . . ။
၁၉၉၈ ခုနှစ် (ပထမနှစ်ကျောင်းသားဘဝ) တုန်းက သားစိုး ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို ဖြတ်စာအဖြစ် ပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ . . . ။ အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး စပ်ထားတဲ့ ကဗျာလေးပေါ့ . . . ရေးတာကတော့ အဆက်ဖြတ်တဲ့ ကဗျာလေး . . . ဒါပေမယ့် ဒီကဗျာလေးကြောင့်ပဲ အဲ့ဒီကောင်မလေးဆီက အဖြေကိုရခဲ့တာ . . . ။
အခုတော့လည်း ဒါတွေက ပြီးခဲ့ပါပြီဗျာ . . . ။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ . . . သိကြတယ်မဟုတ်လား . . အဲ့ဒီကောင်မလေးက သူများနောက်ပါသွားတဲ့အထဲမှာ ပထမဦးဆုံးကောင်းမလေးပဲဗျို့ . . . ။
ရေးသားသူ - T.S ၊ အချိန်- 4:57 AM0Comments
အမျိုးအစား ၊ ကဗျာ, အတိတ်ကပုံရိပ်
ပြောပြချင်ပါတယ် .... ဒါပေမယ့်
တိတ်တခိုးအချစ်နဲ့ လွမ်းရတယ် .....။
ရေးသားသူ - T.S ၊ အချိန်- 3:11 AM 1 Comments
အမျိုးအစား ၊ ကဗျာ
ဝေဒနာ 'သူ' မသိပေမယ့်
လွမ်းလျှက် ကျေနပ် . . . . . ။
ရေးသားသူ - T.S ၊ အချိန်- 3:09 AM0Comments
ပြောပြမယ် ... သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို ...။
ငြိမ်နေတယ်ဆိုပြီး မရေးတော့ဘူးမထင်နဲ့နော် ....။ ရေးဖို့ အရှိန်ယူနေတာ ..။
ဟဲ ဟဲ ဟဲ ...။
ရေးသားသူ - T.S ၊ အချိန်- 7:04 PM2Comments
အမျိုးအစား ၊ စိတ်ကူးတည့်ရာ
သားစိုးက တရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တတ်တာ .. မွေးမြူတတ်တာ အခုမှမဟုတ်ဘူး ...ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ။ ငယ်ငယ်ကဆို ဘာအကောင်ပလောင်လေးတွေပဲရရ အကုန်လုံးကို အိမ်မှာမွေးထားတာ ...။ ခွေးတွေဆိုလည်း လမ်းဘေးကခွေဝဲစားကအစ သနားလို့ဆိုပြီး အိမ်ခေါ်မွေးထားတာလေ ... အိမ်မှာဆို ခွေးတွေမှ အများကြီး ။ အဲ့ဒီခွေးတွေက အိမ်နားက ဖြတ်သွားတဲ့လူတွေကို ကိုက်လို့ ဆေးဖိုးပေးရတာလဲ ခဏခဏပဲ ....။ အဲ့ဒီ ခွေးတွေမွေးလို့ သားစိုးကို အဒေါ်က မြည်တွန်းတောက်တီးလုပ်တာလဲ အကြိမ်ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲ ...။
သားစိုးမွေးတဲ့အထဲမှာ အဒေါ်စျေးကဝယ်ဝယ်လာတဲ့ ငါးအရှင်လေးတွေ ... ပုစွန်အရှင်လေးတွေတောင်ပါသေးတယ် ..။ အဒေါ်က စျေးကနေ ငါးအရှင်လေးတွေ ဝယ်လာတဲ့နေ့ဆို အဒေါ်မသိအောင် ငါးလေးတွေကို ယူယူပြီး အိမ်ရှေ့ အိမ်နောက် ရေအိုး ရေတိုင်ကီ အကုန်ရှိရှိသမျှ လိုက်ထည့်မွေးတာပဲ ...။ အဒေါ်ငါးအရှင် ပုစွန်အရှင်လေးတွေ ဝယ်လာတိုင်းမွေးထားလိုက်တာ .... ရေအိုးတွေ ရေတိုင်ကီတွေမှာ ရေနည်းသွားပြီဆိုရင် ရေခပ် မသုံးလေနဲ့ . . ငါး မဟုတ်ရင် ပုစွန် .. တစ်ကောင် မဟုတ် တစ်ကောင်တော့ ပါလာစမြဲပဲ ...။ အဲ့ဒီတော့ သားစိုးကို အဒေါ်က အမိန့်တစ်ခုထုတ်တယ်ဗျ ...။ အိမ်ရှေ့ အိမ်နောက် ဘယ်ရေအိုး ဘယ်ရေတိုင်ကီမှာမှ ငါးထည့်မမွေးရဘူးတဲ့ ..။ အိမ်ရှေ့ အိမ်နောက်ဆိုတော့ သားစိုးလည်း အဲ့ဒါတွေနဲ့ လွတ်အောင်စဉ်းစားရတော့တာပေါ့လေ ...။ မွေးချင်တဲ့ ၀ါသနာကလည်း ဖျောက်လို့မှ မရကိုးဗျ ...။
ဒါပေမယ့် အိမ်ရှေ့ အိမ်နောက် ရေအိုး ရေတိုင်ကီတွေမှာတော့ ငါးတွေ မတွေ့ရတော့ပါဘူး ... အဒေါ်တို့ကတော့ ကျေနပ်နေတာပေါ့ ... ရေကို သူ့စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရပြီဆိုတော့လေ ...။
အဲ့ .... သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး ... အိမ်ကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တစ်ယောက် သောက်ရေအိုးကရေကို ခပ်သောက်လိုက်တာ ငါးရံ့တစ်ကောင်ပါလာလို့ သားစိုးတို့ ကြောပြင်ဗျောတင်ခံလိုက်သဗျာ ....။ အဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင် အဒေါ်ကရော ဦးလေးကပါ (၂)ယောက်ပေါင်းပြီး တီးတာ ... ။ ငါးကို ၀ါးစားမိတဲ့ ဧည့်သည်က ဝင်ဆွဲပေလို့ပေါ့ဗျာ ...။ သားစိုးတို့ဆို (၁)ပတ် (၂)လောက် ကောင်းကောင်း မထိုင်နိုင်ဘူး ..။ ဖင်နဲ့ ခြေသလုံးမှာ အချိုးရာတွေပြည့်နေလို့လေ...။ အဲ့သလိုကို မွေးမြူရေးကို ၀ါသနာပါတာ ... ။
ရေးသားသူ - T.S ၊ အချိန်- 3:23 AM7Comments
အမျိုးအစား ၊ ဟာသ, အတိတ်ကပုံရိပ်
ကျွန်တော်သည် အဆိုတော်သားစိုး မဟုတ်ပါ . . . ။ ကျွန်တော်သည် ဘလော်ဂါသားစိုးသာဖြစ်ပါသည် . . . ။
ပြောချင်တာရှိရင် ပြောခဲ့ပါ . . .
သားစိုး © 2010 | Blogger by T.S Blog